Ukukhiqizwa kobuciko be-Craft - Ifomu elihlanganisiwe le-Saccharification System - imishini yamadivayisi amabili-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
I-Fermenter / i-Uni-tank
I-Bright Beer Tank
ikhaya Brew & Pilot System
Hop Emuva / CIP
I-Thermal Oil Heating Brewhouse
I-20L Electric Brewing (usayizi wesiko uyatholakala)
Ukukhiqizwa Kwebhiya Wobuciko - Ifomu elihlanganisiwe loHlelo Lokucwengwa - imishini yamadivayisi amabili
Isikhathi: 2020-07-10 Amazwana: 12
Amandla we-Saccharification kungenye yezinto ezibalulekile ezinquma ukukhishwa kukabhiya, futhi inhlanganisela yemishini yokuhlanjululwa ihlobene nokusebenza kahle kokukhiqiza kanye nesikali sokutshala imali sohlelo lwe-saccharification.
Inhlanganisela yezingcezu ezimbili (idivayisi yaseMelika):
Ukunikezela uhlelo lokuhlunga, iketela le-Wort ne-whirl system.
Le nhlanganisela ingagcina cishe amaqoqo amabili ngosuku. Le divayisi inokusetshenziswa okuphezulu kwemishini, izindleko eziphansi zokutshalwa kwemali kwemishini, kepha ukukhiqiza okuphansi.
1. Ukuhlunga impunga kungasetshenziswa kuphela ngendlela yokukhipha. Njengoba ukulawula ukusebenza kwepompo kungelula kakhulu, umphumela wokuhlunga wokupheka izitayela ezahlukahlukene zobhiya uzokwethula isimo esihlukile. Isibonelo, ubhiya kakolweni wenziwa cishe nengxenye yemithombo kakolweni, ngakho-ke uyanamathela futhi uyahlungwa kancane. Lapho ijubane lempompo lingalawulwa kahle, lizodala isimo sokudonsa, bese ungqimba lwezinhlamvu zikakolweni seluqine kakhulu, ukuhlunga kunzima kakhulu, futhi kuholele nasekuguqulweni kwepuleti lesihlungo.
2. Imvula ye-cyclotron izokwenziwa ohlelweni lwe-saccharification, futhi kukhona isidlidlizi esakhelwe ngaphakathi, ubukhona besishukumisi kuzonciphisa kakhulu umphumela we-cyclotron.
Ama-wort wren kufanele alungiswe kusengaphambili, nezinye iziqukathi ezinokwenzeka kufanele zilungiswe ithangi elizobamba amanzi ashisayo. Kungcono ukuba nomphumela wokulondolozwa kokushisa, kepha ukusebenza kunzima kakhulu.
Uma uthanda lolu hlobo lwezinto zokusebenza, ungenza ushintsho, ithangi lokuhlunga liphakeme kunebhodlela le-saccharification, elenza umehluko ophakeme, lingafinyelela ukusefa kwemvelo, ipompo le-wort lisebenzisa ukulawula ukuguqulwa kwemvamisa, lingaguqula isivinini sokugeleza, ukulima ummese wemoto isebenzisa imvamisa ukuguqulwa kwemoto, lungisa ijubane lokujikeleza lommese wokulima. Manje abakhiqizi abaningi ukuze bonge izindleko, khipha ngqo izinga loketshezi, ngakho-ke akukuhle, kunconywa ukufaka ileveli ketshezi, umgodi wokukhipha ukuhlunga ukwengeza ibhodi yokukhipha amanzi.
Ngabe ucabanga ngokuqala iphrojekthi yakho yobuciko? Ungathanda futhi ukuthola umbiko owenziwe ngokwezifiso wephrojekthi yesistimu yezinto zobhiya? Uyemukelwa ukuxhumana nathi wellish@nbcoff.com, sizokwenzela uhlelo lwephrojekthi olwenelisayo.
Previous: Amanothi Wokusebenza Kwezinsiza Zobhiya Zobuciko
Okulandelayo: 500L Brewhosue Turkey Project Ngaphansi Production
Amanzi e-COFF Video
COPYRIGHT © 2020 Ningbo COFF Imishini Co., ltd. WONKE AMALUNGELO AGODLIWE
Ilogo ye-COFF iyimpahla ye-NingBo COFF Machinery Co., ltd.